Marobhoti Vagadziri & Vatengesi - China Robhoti Fekitori
Four akabatana Robhoti Series Four akabatana robhoti dzakatevedzana JZJ100B-230 100KG Four akabatana robhoti dzakatevedzana JZJ25B-180 25KG Four akabatana robhoti akatevedzana JZJ15B-140 15KG Pfupi kuziviswa otomatiki inobata robhoti: 1. Iyo kurodha uye kuturura robhoti ine yakakura mutoro renji kubva akati wandei makirogiramu kusvika mazana emazana makirogiramu; 2. Kumhanya kumhanya kunokasira uye kuchinjika; 3.Flexible chiito, inogona kupedzisa yakaoma kubata uye kurodha uye kudzikisa mabasa; 4. Kuvimbika kwakakwirira uye s ...
Nhanhatu akabatana Robhoti Series Six akabatana robhoti dzakatevedzana JZJ50A-270, 100A270, 50KG Six akabatana robhoti dzakatevedzana JZJ06A-090 6KG Six akabatana robhoti dzakatevedzana JZJ10A-160 10KG Six akabatana robhoti dzakatevedzana JZJ20A-180 20KG Pfupiso sumo otomatiki kubata robhoti: 1. The vachizvitakudza uye kuburutsa robhoti kune yakakura mutoro renji kubva kumakirogiramu akati wandei kusvika kumazana mazana emakirogiramu; 2. Kumhanya kumhanya kunokasira uye kuchinjika; 3.Flexible chiito, inogona kupedzisa yakaoma kubata uye loa ...
Welding robhoti Welding robhoti akatevedzana JZJ06C-180 Welding robhoti akatevedzana JZJ06C-144 Welding robhoti akateedzana JZJ06C-160 Welding robhoti akateedzana JZJ06C-200 Pfupi sumo Welding robhoti irori indasitiri robhoti kuita kutema (kusanganisira kucheka nekupopera). Zvinoenderana netsananguro yesangano repasi rose reStandization (ISO) iro remaindasitiri robhoti ndereyakajairika kutungidza robhoti, maindasitiri robhoti chirongwa chakasiyana-siyana, chinodzokororwa ...